डिप्रेसनका लक्षण, कारण र बच्ने उपाय
-मधुकर पुन विज्ञान प्रबिधिको बिकास संगै आधुनिक युगमा मानसिक रोगबाट शिकार भएका व्यक्तिहरु धेरै देखिन्छन् । मानसिक रोगहरु मध्ये धेरै व्यक्तिहरु डिप्रेसनको शिकार भएको पाइन्छ । डिप्रेसन जुनसुकै उमेरमा जो कसैमा पनि हुन सक्छ...
डा.हेमराज कोइराला डिसलिपिडिमिया अर्थात कोलोस्टेरोल र ट्राईग्लिस्राईड जस्ता रक्त चिल्लोको गडबडी हुने समस्या आज हरेक बयस्क व्याक्तिको समस्या जस्तै भइसकेको छ । हाम्रो रगतमा संयुक्त कोलेस्टेरोल, काईलोमाईक्रोन, एलडीएल कोलेस्टेरोल, भिएलडिएल कोलेस्टेरोल, र एचडीएल कोलेस्टेरोल,...
काठमाडौं । बियर पिउँदा कुनै फाइदा हुँदैन । यसले मोटोपन बढाउँछ भन्ने आम विश्वास छ । बियर शरीरका लागि हितकारी पनि छ भन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ओरेगन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बियर पिउँदा...
काठमाडौं, ७ वैशाख । भारतमा पहिलो पटक भेटिएको कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट यूकेमा पत्ता लागेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यसमा भएको आनुवंशिक परिवर्तनले त्यसलाई झन् छिटो फैलिने बनाएको हुनसक्ने र यसअघिको सङ्क्रमण वा वर्तमान खोपले...
पोखरा, ५ वैशाख । उपत्यकाबाहिर गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक २५६ स्लाइसको सीटी स्क्यानको सुविधा विधिवत् रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको पोखरा एमआरआई डाइग्नोस्टिक सेन्टरले यो सीटी स्क्यान सेवाको प्रारम्भ गरेको...
-डा. सुरजकुमार गुप्ता काठमाडौँ, २४ चैत । वायु प्रदूषणका कारण उकुसमुकुस बनेको वातावरण । खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माणका नाममा खोतलिएका सडकहरुबाट उड्ने धूलोको उस्तै समस्या । घरबाट बाहिर निस्किँदा विषाक्त प्रदूषणका कारण...
डा. हेमराज कोइराला रगतको अक्सिजन ओसारपसार गर्नसक्ने क्षमतामा आएको कमीलाई चिकित्सकिय भाषामा रक्तअल्पता वा एनेमीया भनेर भन्ने गरिन्छ । यो रोगबाट संसारभर १ अरब ६२ करोड मान्छेहरू ग्रसित छन् । रक्तअल्पता हुँदा राता रक्तकोषहरूमा...
काठमाडौं, १७ फागुन । अब नेपालीले क्यान्सर उपचारका लागि विदेशका अस्पताल धाउनु नपर्ने भएको छ । स्वदेशमा नै गुणस्तरीय क्यान्सर उपचार सेवा दिने ध्येयले झापाको विर्तामोडमा स्थापित ‘पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल’ पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएसँगै क्यान्सर...
काठमाडौं, ९ फागुन । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले प्रदान गर्दै आएको आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट (ओपीडी) सेवालाई डिजिटाइज्ड गरेको छ । चालू अवस्थामा रहेको ओपीडी डिपार्टमेन्टलाई थप पुनर्निर्माण गरी अझ स्तरीय र आधुनिक बनाई सेवाहरूलाई डिजिटाइज्ड...
काठमाडौं, ६ फागुन । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले महिला सर्जनबाटै महिलाहरुको स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया सेवा शुरु गरेको छ । भारतका प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेर महिलाहरुमा विकराल बन्दै गएको स्तन क्यान्सरको विषयमा खोज गरेकी नेपाली चिकित्सक...